Injection ကိုငါးအသုံးပြုရန် LHRH-A2 - တရုတ် Ningbo ဒုတိယအဟော်မုန်း
Luteinizing ဟော်မုန်း Injection ကိုများအတွက်ဟော်မုန်း A2 ဖြင့်ထုတ်လွှ【အင်္ဂလိပ်အမည်】: Injection ကိုများအတွက်ဟော်မုန်း A2 ဖြင့်ထုတ်လွှ Luteinizing ဟော်မုန်း【ဗိုလ်မှူးပါဝင်ပစ္စည်းများ】: Luteinizing ဟော်မုန်းဟော်မုန်း A2 【ဖျေါပွခကျြ】ဖြင့်ထုတ်လွှ Luteinizing ဟော်မုန်း Injection ကိုများအတွက်【ဘုံအမည်】【ကုသရေးဆေးဝါးအမည်】ဟော်မုန်း A2 ဖြင့်ထုတ်လွှ : ဒီထုတ်ကုန်【 Pharmacological အကျိုးသက်ရောက်မှု】အဖြူအေးခဲ-အခြောက်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု-shaped ပစ္စည်းဥစ္စာဒါမှမဟုတ်အမှုန့်သည်: ဒါဟာ GTH (ကြိမ်မြောက်လွှတ်ပေးရန်ငါး hypophysis မြှင့်တင်ရန်နိုငျသောက high-အကျိုးရှိစွာငါး odinagogue ဖြစ်ပါတယ် ...
Luteinizing ဟော်မုန်းဟော်မုန်းတစ်ဦးကထုတ်လွှ2Injection ကိုများအတွက်
【ဘုံအမည်】: Luteinizing ဟော်မုန်းဟော်မုန်းတစ်ဦးကထုတ်လွှ2Injection ကိုများအတွက်
【အင်္ဂလိပ်အမည်】: Luteinizing ဟော်မုန်းဟော်မုန်းတစ်ဦးကထုတ်လွှ2Injection ကိုများအတွက်
【ဗိုလ်မှူးပါဝင်ပစ္စည်းများ】: Luteinizing ဟော်မုန်းဟော်မုန်းတစ်ဦးကထုတ်လွှ 2
【ဖျေါပွခကျြ】: ဒီထုတ်ကုန်အဖြူအေးခဲ-အခြောက်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု-shaped ပစ္စည်းဥစ္စာဒါမှမဟုတ်အမှုန့်ဖြစ်ပါတယ်
【 Pharmacological အကျိုးသက်ရောက်မှု】: ဒါဟာ (ထိုဟော်မုန်းများနှင့် follicles-လှုံ့ဆော်ဟော်မုန်း luteinizing သည်) GTH လွှတ်ပေးရန်ငါး hypophysis မြှင့်တင်ရန်နိုငျသောက high-အကျိုးရှိစွာငါး odinagogue ဖြစ်၏ အထီးငါးဘို့သုက်ပိုးထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရင့်ကျက်လှုံ့ဆော်; Corpus luteum ၏ follicles င့်ကျက်မှု, မျိုးဥထွက်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုအရှိန်အဟုန်မြှင့်ကူညီကြမည်ဖြစ်သောအီစထိုဂျင် secrete မှအမျိုးသမီးငါးရဲ့ follicles မြှင့်တင်ရန်
ဖြေ Spawning သော induction: 1. မြက်ငါးကြင်း: တစျခုဆေးထိုး, 1-2mcg / ကီလိုဂရမ်
2. Black ကငါးကြင်း: နှစ်ခုကိုထိုး; ပထမဦးဆုံးဆေးထိုး: 0.5mcg / ကီလိုဂရမ်; ဒုတိယဆေးထိုး: 1-2mcg / ကီလိုဂရမ် + ငါး hypophysis: 1-3mcg / ကီလိုဂရမ်; ဆင်းရဲသောသူသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာင့်ကျက်မှုနှင့်အတူသူတို့အဘို့, ထိုမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုကြိုတင် 10-20 ရက်အတွင်းသုံးနိုင်တယ်။
3. Chub, bighead: နှစ်ခုကိုထိုး; ပထမဦးဆုံးဆေးထိုး: 0.2-0.4 mcg / ကီလိုဂရမ်; ဒုတိယဆေးထိုး: 1-1.5mcg / ကီလိုဂရမ်; ဤအထိုးနှစ်ခုစလုံး 10-12 နာရီအားဖြင့်ကွဲကွာနေကြသည်။
B က: Maturity အရှိန်: ပုံမှန်ဆား၌ဤထုတ်ကုန်ပျော်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းအရောအနှောထက် oleum morrhuae သို့မဟုတ်လက်ဖက်ရည်ရေနံပမာဏ၏ငါးကြိမ်င်တစ်ဦးမော်တာထဲသို့အရောအနှောယို။ က emulsify အောင်ရွှဲစဉ်ကစပါးကိုကြိတ်။ spawn သော induction ၏ 10-25 ရက်မတိုင်မီက 0.1-0.3mcg / ကီလိုဂရမ်နှုန်းအဖြစ်ထိုးသွင်း။ အထီးငါးများအတွက်သောက်သုံးသော Halve ။
【 Specification 】: (1) 25μg; (2) 50μg; (3) 125μg
【သိုလှောင်】: တင်းကျပ်စွာတံဆိပ်ခတ်အလင်းထဲက Protected နှင့်အေးမြမှောင်မိုက်အရပ်တွင်ထားရှိမည်
ယခင်: Domperidone Injection
နောက်တစ်ခု: Injection ကိုငါးအသုံးပြုရန် LHRH-A3
တိရစ္ဆာန်များအဘို့ဟော်မုန်း Estradiol Benzoate Injection
Ovaprim ငါး spawn ဖြန့်ဖြူးသည်
Ovaprim Injection ကိုငါးဟော်မုန်း
ငါးမွေးမြူရေးသည် Ovaprim Injection ကိုငါးဟော်မုန်း